Uvimba wokukhulelwa - Ilungelo laseMelika lokwazi
Oomama babonakaliswe kuMonsanto Weed Killer Means kuthetha Iziphumo ezimbi kubantwana
ezaposwa ngomhla Aprili 5, 2017 by UCarey Gillam
Ukuxhalaba malunga neyeza elisetyenziswa kakhulu kwihlabathi lonke lithatha into entsha njengoko abaphandi betyhila idatha ebonisa ukusetyenziswa gwenxa kombulali wokhula weMonsanto Co. kunokunxulunyaniswa neengxaki zokukhulelwa.
Abaphandi bajonge ekufumaneni iyeza lokubulala ukhula elaziwayo njenge glyphosate, eyona nto iphambili kwiMoldanto's Roundup herbicides enophawu, bathi bavavanya kwaye balanda oomama abakhulelweyo abangama-69 kwaye bafumanisa ukuba ubukho bamanqanaba e-glyphosate kulwelo lwabo lomzimba luhambelana neziphumo zokuzalwa ezingathandekiyo. Uphando lusekwinqanaba lokuqala kwaye ubungakanani besampulu buncinci, kodwa tIqela icwangciselwe uku thaca iziphumo zabo NgoLwesine kwinkomfa ebekwe liNethiwekhi yezeMpilo yaBantwana (i-CEHN) eWashington, DC
"Lo ngumcimbi omkhulu," utshilo uPaul Winchester, umlawuli wezonyango wecandelo labakhulelweyo abasandul 'ukuzalwa kwiNkqubo yezeMpilo yaseFranciscan eSt. Francis kunye nonjingalwazi wezifo zabantwana kwizibhedlele iRiley Hospital yaBantwana eIndianapolis, eIndiana. Uthe esi sisifundo sokuqala e-US ukubonisa ukuba i-glyphosate ikho kubafazi abakhulelweyo. Wonke umntu kufuneka ayixhalabele le nto. ”
IGlyphosate sisibulali zinambuzane esithandwayo kwezolimo, esisetyenziswa ngokubanzi kwimisebenzi yokufama kwihlabathi liphela. Kuqhele ukufafazwa ngokuthe ngqo kwizityalo ezininzi zokutya kunye nezo zisetyenziselwa ukutya kwemfuyo. Kodwa sele ingumbandela wengxoxo eshushu kule minyaka imbalwa idlulileyo ngenxa yophando oludibanisa i-herbicide neentlobo zomhlaza kunye nezinye izifo zempilo. IMonsanto ityholwa ngamakhulu abantu abathi bona okanye abo babathandayo baphuhlisa i-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuvezwa kwe-glyphosate-based Roundup. IMonsanto, i-EPA kunye neminye imibutho elawulayo, ithi ubungqina be-carcinogenicity buyasilela kwaye imichiza iphakathi kwezona zikhuselekileyo zinambuzane ezisetyenziselwa ukuvelisa ukutya. Kodwa amaxwebhu afunyenwe Ngexesha lesimangalo bonisa ukuba inkampani inakho ndisebenzise uphando lwenzululwazi ukufihla ubungqina bokwenzakala.
Iqela elinike ingxelo yalo ngoLwesithathu libandakanya izazinzulu ekudala zikholelwa kwiimveliso zeMonsanto kunye nabaphandi bezonyango abaye banenkxalabo malunga ne-glyphosate kunye nezinye izibulala-zinambuzane ngokufunda kwabo iingxaki zempilo yabantwana.
UWinchester, obekhokele isifundo seesampulu zomchamo, uthe ukujonga kwakhe i-glyphosate kunye nabasetyhini abakhulelweyo bakumanqanaba okuqala kwaye yena kunye nabaphengululi banethemba lokusungula iprojekthi enkulu kakhulu kamva kulo nyaka. Umsebenzi wokuqala wafumanisa i-glyphosate kumchamo wama-63 wama-69 (91%) wabasetyhini abakhulelweyo abafumana ukhathalelo lwangaphambi kokubeleka ngoqheliso lokubelekisa e-Indiana. Abaphandi baqokelela idatha kwisithuba seminyaka emibini, ukusuka ngo-2015-2016, kwaye bafumanisa ukuba amanqanaba aphezulu e-glyphosate kwabasetyhini ahambelana nokukhulelwa okufutshane kakhulu kunye nobunzima bokuzalwa obuhlengahlengisiweyo.
Ukulungelelaniswa akubonakali kungunobangela. Okwangoku, iziphumo zinxunguphalisa kuba ubunzima bokuzalwa okuphantsi kunye nokufinyezwa kokukhulelwa kubonwa njengemingcipheko yezempilo ezininzi kunye / okanye iingxaki ze-neurodevelopmental ngexesha lobomi bomntu. Iintsana ezinobunzima bokuzalwa obuncinci Banesifo seswekile, isifo sentliziyo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, kwaye batyebe, uphando lubonisa.
Abantu banokuvezwa kwi-glyphosate ngokutya nangokudibana nemisebenzi yokulima efafaza i-glyphosate kwimimandla yombona neyeesoya. Zombini i-soy kunye nombona, kunye nezinye izityalo, zenziwe ngobuchwephesha zemfuza ukunyamezelana nokusetyenziswa ngokuthe ngqo kwe-glyphosate. Amafama ahlala esebenzisa i-glyphosate ngqo kwingqolowa, i-oats kunye nezinye izityalo ezingezizo ezofuzo kungekudala ngaphambi kokuvuna, okukhokelela kwintsalela kwiimveliso zokutya ezisekwe kwingqolowa.
Ukusetyenziswa kweGlyphosate kuye kwenyuka kakhulu kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo ngokunyuka kwezityalo ezenziwe ngobunjineli kunye nokunxibelelana okulandelayo kukhula olunganyangekiyo lwe-glyphosate. UGqirha Charles Benbrook, ongomnye wabasasazi abacwangcisiweyo kwinkomfa ye-CEHN, iiprojekthi ezithi nge-2020, "iihektare ezininzi zomhlaba wokulima eMidwest ziya kuba nokhula ezintathu okanye ngaphezulu ukhula olunganyangekiyo kunenye okanye hayi." Amafama bezama ukulwa nokhula olunganyangekiyo ngeglyphosate kunye nezinye iikhemikhali. Izityalo ezitsha ziyilelwe ukunyamezela i-2,4-D kunye ne-dicamba herbicides exutywe ne-glyphosate. Idatha yemizi-mveliso ibonisa ukuba ukusetyenziswa kweyeza kulindeleke ukuba qhubeka nokunyuka, eyenza ukuba kubaluleke ngakumbi kwizazinzulu nakwingcali yezonyango ukuba ifumane isiphatho kumanqanaba okuvezwa kunye nefuthe kwimpilo yokuzala, iqela lathi kwintetho yabo.
IWinchester ibisenza uphando ngokuchasana nokubulala izitshabalalisi kunye nefuthe kwabasetyhini abakhulelweyo iminyaka emininzi, kubandakanya nomsebenzi onzulu kwi-atrazine, enye i-herbicide eyaziwayo ngamafama. Uthe wamangaliswa kukubona ipesenti ephezulu kangaka yabasetyhini kuvavanywa ukubonisa i-glyphosate kumchamo wabo. Uthe uphando oluninzi ngakumbi kwiimpembelelo ze-glyphosate luyafuneka, kwaye idatha eninzi iyafuneka kumanqanaba okuvezwa kukutya. Wayemgxeka kabukhali urhulumente wase-US, owayedla ngokutsiba ukuvavanywa kweentsalela ze-glyphosate ekutyeni nangona iiarhente zolawulo zivavanya amawaka emveliso yokutya unyaka ngamnye kwiintsalela zezinye iintlobo zemithi yokubulala izitshabalalisi, kubandakanya i-atrazine.
Yena kunye nabanye abaphandi bacela amaziko okuLawula izifo ukuba afake i-glyphosate kunye ne-metabolite yayo ephambili, i-aminomethylphosphonic acid (AMPA) kwi Umsebenzi wokuhlola lenza umkhondo wenqanaba lokubulala izitshabalalisi kunye nezinye iikhemikhali kumchamo nasegazini.
“Ingaba eli nqanaba lokuvezwa likhuselekile okanye akunjalo? Sixelelwe ukuba kunjalo, kodwa ukubonakaliswa akukhange kulinganiswe, ”utshilo uWinchester. Iyothusa ingqondo. ”
(Kuqala kuthunyelwe IHuffington Post)
Ukutya kwengqondo, Izifo ezinxulumene nokutya, Uphando lwethu, Pesticides, Akohlulwanga ulimo, EPA, zolimo, ukutya, glyphosate, utywala, IMonsanto, ukukhulelwa, Yisonge yonke